Mashiinka buuxinta kareemka tooska ah ee otomaatiga ah ee ugu fiican Mashiinka wax soo saarka iyo Warshada |Ipanda
Mashiinka daboolka kareemka ee buuxinta tooska ah ee servo motor
Mashiinka buuxinta otomaatiga ah ee servo oo leh nadiifin degdeg ah, hagaajin degdeg ah, cabbiraadda cabbirka bamka tallaabo sharciyeedka xawaaraha, khadka oo dhan wuxuu qaataa nidaamka xakamaynta caqliga, hagaajinta tirada buuxinta, ama beddelka noocyada waxay u baahan yihiin oo keliya in lagu dhejiyo shaashadda taabashada.
Mashiinnada khadka wax soo saarka
Warshadeenu waxay ku siin kartaa qalab dhamaystiran oo loogu talagalay khadka buuxinta, oo ay ku jiraan unscrambler dhalada, mashiinka buuxinta, mashiinka daboolka, mashiinka dhejiska, mashiinka calaamadaynta iyo wixii la mid ah.
Habka wadista gawaarida ee 1.Servo waa la aqbalay, xawaaraha buuxintu waa mid deggan, isticmaalka hawadu waa yar yahay.Habka buuxinta ee degdega ah marka hore ka dibna gaabis ah ayaa la dejin karaa, taas oo ah caqli badan iyo bini'aadminimo.
2.Isticmaalka noocyada caanka ah ee gudaha iyo dibadda ee qaybaha korantada iyo pneumatic, heerka fashilka ayaa hooseeya, waxqabadku waa mid deggan, iyo nolosha adeeggu waa mid dheer;
3.Isku-habaynta xogta hawlgalka waa mid fudud, buuxinta saxda ah ee saxda ah, iyo fududahay in la isticmaalo;
4.Dhammaan agabka xidhiidhka waxa ay ka samaysan yihiin bir bir ah, taas oo aan fududayn in la daxaleeyo, fudud in la kala furfuro, si fudud loo nadiifiyo, oo la kulma heerarka nadaafadda cuntada;
5.Waa sahlan tahay in la hagaajiyo xajmiga buuxinta iyo xawaaraha buuxinta, iyada oo aan lahayn dhalo iyo maado si loo joojiyo buuxinta iyo quudinta tooska ah.Heerka dareeraha ayaa si toos ah u xakameynaya quudinta, muuqaalkuna waa qurux;
6.Qalabka buuxinta waxaa loo bedeli karaa buuxinta qulqulka, taas oo si wax ku ool ah uga hortagi karta walxaha buuxinaya xumbo ama firidhsan, waxayna ku habboon tahay buuxinta dareeraha si sahlan loo xumbo;
7.Qalabka buuxinta waxaa lagu qalabeeyaa qalab ka-hortagga faleebada si loo hubiyo in aysan jirin sawir siligga ah ama qulqulaya inta lagu jiro buuxinta;
8. Looma baahna in la beddelo qaybaha, waxaad si dhakhso ah u hagaajin kartaa oo aad u beddeli kartaa dhalooyinka qaababka iyo qaababka kala duwan, oo leh awood xoog leh.
Kahor adeega dalbashada
Sida shardigaagu yahay waxaanu kuu samayn doonaa xigashada faahfaahinta.Waxaan kuu soo diri karnaa qaar ka mid ah mashiinkayaga fiidiyoow socda oo la mid ah alaabtaada.Haddii aad timaaddo Shiinaha, waxaanu kaa soo qaadi karnaa garoonka diyaaradaha ama saldhiga magaaladayada u dhow.
Adeegga dalbashada kadib
Waxaan bilaabi doonaa inaan samayno mashiinka, oo aan sawir ka qaadno 10 maalmood ee habka wax soo saarka.
Injineerkeena ayaa naqshadayn kara qaabka si waafaqsan shuruudahaaga.
Waxaan bixin doonaa adeegga komishanka haddii macaamiishu u baahan yihiin.
Waxaan tijaabin doonaa mashiinka, waxaanan kaa qaadi doonaa xoogaa muuqaal ah iyo sawir haddii aadan imaanin mashiinka baarista Shiinaha.
Mashiinka tijaabada ka dib waxaanu baakayn doonaa mashiinka, iyo weelka geeynta wakhtiga loogu talagalay.
Waxaan kuu soo diri karnaa injineerkeena waddan kaa caawiya rakibaadda iyo tijaabinta mashiinka.waxaan ku tababari karnaa shaqaalaha farsamada bilaashka ah ilaa ay ka madax banaan yihiin mashiinka.
Shirkaddayadu waxay ku siin doontaa dhammaan mishiinnada leh dammaanad 1 sano ah. In 1years waxaad ka heli kartaa dhammaan agabka agabka bilaashka ah annaga. waxaanu kuugu soo diri karnaa si degdeg ah.
Mashiinka buuxinta oo ay ka buuxaan kiis alwaax ah oo u qalma badda sida xirmada dhoofinta guud.Waxaan u isticmaalnaa kartoon sida baakad gudaha ah, haddii ay dhacdo in dhaawac soo gaaro koorsada gaariga, waxaan sidoo kale ku xirxi karnaa sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha
Hore: Si otomaatig ah oo otomaatig ah u kontoroolka mashiinka shaambooga mashiinka buuxinta kareemka jel
Xiga: Tooska ah ee Servo Piston Laydhka Mashiinka Buuxinta Saabuunta Dharka
Mashiinka buuxinta qurxinta
mashiinka buuxinta jel cream
mashiinka buuxinta xakamaynta servo
Mashiinka Buuxinta Shambo
Dhalo Dareere ah oo Si Toos ah u Dhan ah
Mashiinka Buuxinta Lotion Shaambo
Mashiinka Buuxinta Saliida
Buuxinta dhalada Shaambo toos ah iyo dabool Ma...
Si toos ah 4 madax dhalo buuxinta malab iyo c...
Buuxinta Saliidda Muhiimka ah ee Dhalada ah ee Tooska ah ...
Mashiinka buuxinta malabka oo toos ah Mishiinka buuxinta dareeraha tooska ah mashiinka buuxinta saliidda cuntada Mashiinka Buuxinta Saliida mashiinka buuxinta malab Mashiinka Buuxinta Tuubbada Bistoon